Nei Nichijou Asina Kuva Nechiiri Mwaka wechipiri, Pasinei Nemukurumbira Wakanaka - Zvimwe
Nei Nichijou Asina Kuva Nechiiri Mwaka wechipiri, Pasinei Nemukurumbira Wakanaka weAnime
Nguva nenguva vanhu vanozvibvunza kuti sei showa yakadai saNichijou isina kuwana rakakodzera-rakakodzera.
Paunotsvaga zvakapusa paGoogle, uchaona zana kana zana remazana ezvinyorwa zvakanyorwa nezvazvo.
Imwe neimwe yadzo inosiyana.
Vamwe vanoti imhaka yekukanganisa kwayo kwekutengesa kwekutengesa
vamwe vachakuudza kuti imhaka yekuti yanga isingaenderane nezvinodiwa nemuoni weanime.
Uye vamwe vanoti imhaka yekuratidzwa kwakasarudzika uye mhirizhonga, izvo zvakaoma kupokana nazvo.
Wese munhu ane maonero akasiyana uye ini ndiri pano kuti nditaure zvangu.
Ngatitangei nekuziva mamiriro ekuratidzwa uku
Nichijou muJapan manga akateedzana yakagadzirwa uye inoratidzwa naArawa Keichii.
Yakatanga serialization muna Zvita wa2006 kuburitswa kwaKadokawa Shoten's manga magazini: Shōnen Ace
Iyo zvakare yakaiswa serial mu Comptiq pakati paKurume 2007 naJuly 2008 zvinyorwa.
Kadokawa Shoten yakazoburitsa zvitsauko zvese zvakateedzana mumavhoriyamu gumi eTankōbon kubva muna Chikunguru 2007 naZvita 2015.
Zvichakadaro, 26-episode anime adaptation yakabva yaendeswa naTatsuya Isihawa uye yakagadzirwa naKyoto Mhuka
Iyo inozivikanwawo seKyoAni.
Yakatepfenyurwa muJapan pakati paApril 2011 naGunyana 2011, mushure mekubuditswa Kwekutanga Vhidhiyo Kugadziriswa (OVA) munaKurume.
Iyi show inotarisa paGolden Trio yaMai Minakami, Mio Naganohara uye Yukko Aioi. Uye utatu hutsvene hweratidziro iyi hunosanganisira Hakase ('Muzvinafundo'), Nano neMAN uyo akatsungirira chiuru mavanga, Sakamoto.
Gara mutaundi reSuburban reJapan, cast yaNichijou inogadzirwa neyakaunganidzwa seti yevatambi vane nguva kubva kwavo hupenyu hwezuva nezuva.
akanaka uye anodakadza
kune weird uye asinganzwisisike
Uye pasina zvakanyanya kutarisa rondedzero sezvingatarisirwa kubva kune anime kubva kuchidimbu-che-hupenyu mhando.
Nichijou yaive nzira nyowani yevaraidzo kumashure muzuva rayo, kuva nehushingi hwekuita zvinopesana asi zvichiri kunzi zvakakosha.
Sekuongorora kweMAL Ryhzuo akati:
'Nzira yaNichijou yekuchengetedza mari asi yakasarudzika inotiyeuchidza kuti chimwe chinhu chakakwana kwete nekuti hapana chimwezve chekuwedzera pazviri, asi nekuti hapana chimwezve chingabvisa'.
Sekucherechedza kwakawanda, Nichijou akave iyo mudiwa yemunharaunda. Kunyanya kune vateereri vekumadokero.
Ingoenda kuYouTube uye utarise CHIMWE Nichijou clip uye utarise kune zvakataurwa, ndinokuvimbisa kuti zvese zvauri kuona ndezvekurumbidza uye hapana chimwezve.
Asi, Nichijou haana kufarirwa muJapan sezvazvinozivikanwa chete kunharaunda inotaura Chirungu (sekureva kwambotaurwa).
Zvese izvi nekuda kwekuedza kwenharaunda ina-chan kuti iyi anime yakawana kuzivikanwa kunoramba kwakasimba kusvika nhasi.
Kunyangwe paine mukurumbira, ichokwadi kuti iyi show haIYE kuva nemwaka 2.
Inoenderana: Aya ma17+ Anime Anoratidza Anoda Mumwe Mwaka ASAP!
Nei Nichijou Asingazove Nemwaka wechipiri:
Kunyangwe neayo hunoshamisa hunyanzvi iyo ine pallet ine mavara (yakafanana neLucky Star), yakanga isina kukwana. Ndiko kunyangwe izwi risina mutsindo richiita.
Nichijou chete haisi yemunhu wese.
Mumwe muongorori zvinyorwa akati:
'Ndiwo mubatanidzwa wemavara asinganzwisisike, kuseka kwemitauro kwakarasika mushanduro, kuneta nekukanganisa uye nguva yakaipa yekutamba kuti vese vakaungana kuti vaite izvi uye musumbu risingabatike f * ck!'
SaNichijou ari mutambo wemitambo yekuseka, kuseka kwacho kuri nyore uye kunoonekwa sekukanganisa kwechiratidziro. Chiri kunyanya chimwe chezvikonzero nei show yakundikana (MuJapan).
Yakanga isingakwanise kuvaka Kufarira kweJapan. Uye sezvo Japan ndiyo chete nzvimbo iyo Nichijou ari kupihwa rezenisi yakawanda yemubatsiro wayo yakavimba nevateereri veJapan.
Vateereri vavo vakuru vanoita purofiti havana kufarira kuratidzwa. 4-pani comic adapta ari kure kubva kutsva uye inoda imwe mhando gimmick kuti zvisiyane pachayo kubva kurongedza
Semuyenzaniso, Lucky Star, yaishandisa zvisingaverengeki parodies, kutamba kwekutamba uye pamusoro pemasekesa epamusoro uye akanaka uye ane mavara ehupenyu anowedzera kune yayo yekukwirisa uye ine simba yekushongedza.
Azumanga ine simba rayo uye 'magetsi cast' uye K-On! ine fungidziro yayo yakanaka yevasikana vakanaka vanoita zvinhu zvinoyevedza zvakare yakamira.
Asi Nichijou aive nyonganiso.
yakazadzwa pasina majee aneta ayo ave achishandiswa zvakanyanya uye neine hunyanzvi hwemaitiro izvo zvaisangoenderana neyakajairika anime muoni pallet.
Zvese izvi zvikanganiso izvo zvinomiririrwa nechiratidziro chikonzero chikuru chekuti nei chakava chimwe chekukundikana kukuru kwati kwamboitwa neKyoAni.
Yakanga yakakurumbira asi kutengesa hakuna kuratidza muJapan (kutengeswa kwakashata).
chakanakisa chidimbu chehupenyu anime akatumidzwa
Sokutaura kwakaita ANN muongorori Martin Theron: 'Pasinei nekukwanisa kweshoo yekuvaraidza iri zvachose haisi nhevedzano yemunhu wese'.
Inoenderana: 6 Yeiyo Weirdest Anime Iwe Unogona Kusakwanisa Kutora Zvakakomba
Kana iwe ukabvunza chero munhu kuti nei Nichijou akatadza, ruzhinji runotaura chinhu chimwe: “Nichijou akatadza nekuda kwekushambadzira kwakaipa.
Izvi zvakatotaurwa nemutungamiriri wemifananidzo Shunji Suzuki.
DVD neBD yekutengesa yaive yakaderera nezvikonzero zvakawanda. Mumwe wavo ari mutengo.
Iyo yekutengesa poindi yeNichijou ndeye 7,000-8,000 Yen inova 2,000-3,000 Yen yakakwira kupfuura yakajairwa DVD neBD mutengo.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti akafanana mazita kubva kuKyoAni senge Lucky Star, Haruhi Suzumiya, uye K-ON! rova musika nemutengo mumwe chete asi zvakadaro wakaita purofiti yakakura uye wakasimudza machati ekutengesa.
Izvo zvakakoshawo kufunga nezve chokwadi chekuti KyoAni haina kunyatsoruramisa mutengo waNichijou.
Ini ndinotenda pane zvimwe pazviri kupfuura kushambadzira kwakaipa kwakatungamira mukufa kwaNichijou. Imwe pfungwa iri 2011 muJapan.
3. Nichijou akaburitsa mwedzi mumwe chetewo neTsunami ya2011 muJapan
Hupfumi mamiriro eJapan muna 2011 yakanga iri imwe yenjodzi dzinongoitika dzoga dzinoparadza dzakaitika munhoroondo yakanyorwa.
Njodzi yenyukireya yeFukushima Daichii uye tsunami yeTōhoku nekudengenyeka kwenyika kunozivikanwawo se 'Njodzi nhatu' yakaremadza hupfumi hweJapan nenyika pachayo.
Izvi zvakaita kuti kukosha kweYen kuderere, zvichikonzera infaltion.
Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru nei vanhu vazhinji vasingakwanise kutenga maDVD nemaBD ayo ari pamusoro pemutengo wakatarwa.
Zvakare panguva iyoyo, Japan rakadzoserwa kumashure nekuda kwehuwandu hwerufu.
Zvinhu zvinoitika nekuda kwechikonzero uye isu tinofanirwa kuzvifunga.
Isu tinofanirwa zvakare kudzidza kugamuchira mugumo wemukana uyu wakarasikirwa naNichijou sechibvumirano.
Izvi Ndo Zvinoita kuti Kyoto Mifananidzo YAKASIYANA Kune Dzimwe Studios
Iwo Anonyanya Kuzivikanwa Nichijou Makotesheni Ausingade Kupotsa
pamusoro gumi mukurusa anime nguva dzese
chakanakidzwa kunzi chidimbu chehupenyu anime
megalo bhokisi, yuru musasa, asobi asobase, kutumbuka mukati mako